आकासे झरिमा पानी सगै ९० प्रतिशत प्लाष्टिक पनि पर्छ ? «
आकासे झरिमा पानी सगै ९० प्रतिशत प्लाष्टिक पनि पर्छ ?
प्रकाशित मिति : 18 August, 2019 6:58 am
एजेन्सी । आकाशबाट पानीसँगै प्लाष्टिक पनि परिरहेको कोलोराडोको वर्षा सर्वेक्षण गरिरहेका अनुसन्धानकर्ताहरुको निष्कर्ष छ । डेन्भर र बोल्डरस्थित अमेरिकी आन्तरिक विभाग र युएस जिओलोजिकल सर्भेका वैज्ञानिकहरुले गरेको अध्ययनमा यस्तो पाइएको हो । ‘प्लास्टिक परिरहेको छ’ शीर्षकको सो अध्ययनमा फेला परेका प्लाष्टिक फोहोर र कपडाहरुबाट हुन सक्ने बताइएको छ ।
विश्वभरका श्रोतबाट आउने प्लाष्टिकका टुक्रा अन्त्यमा समुद्रमै मिल्ने गर्दछ जसले माछा लगायत पानीमा बस्ने जीवहरुलाई गम्भीर नोक्सान पुर्याइरहेको छ । यअसघिको खोजमा पनि मान्छेले हरेक हप्ता क्रेडिट कार्ड जत्रै ५ ग्राम प्लास्टिक निलिरहेको पत्ता लागेको थियो । तरपनि अझै यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा पुर्याउन सक्ने हानिबारे भने कुनै जानकारी प्राप्त नभएको वैज्ञानिकहरु बताउँछन् ।
यसबीच थुप्रै शहरले प्लाष्टिकमाथि प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन् । तर उता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने मंगलबार मत्र पेनिसिल्भेनियास्थित एउटा प्लास्टिक निर्माता उद्योगमा प्लाष्टिकको प्रचारका निम्ति उपस्थिति जनाएका हुन् । कार्यक्रममा एक संचारकर्मीले उनलाई बढ्दो प्लाष्टिक प्रदुषणबारे प्रश्न गर्दा उनले सबै समस्याका लागि चीन जिम्मेवार भएको आरोप लगाए ।
उनले भनेका हुन्, “एसिया र विशेषगरी चीनबाट हामीकहाँ अत्याधिक धेरै सङ्ख्यामा प्लाष्टिक आइरहेको छ । त्यसैले त्यो हाम्रो प्लाष्टिक होइन । समुद्रमा देखिएका प्लाष्टिक अरु देश र अन्य विभिन्न श्रोतबाट त्यहाँसम्म पुगेका हुन् । प्लाष्टिक राम्रो होइन तरपनि हामीले त्यसको सही उपयोग गर्नेबारे थाहा पाइरहनुपर्छ । अन्य राष्ट्रहरुले यसलाई राम्रो व्यवस्थित गरिरहेका छैनन् । त्यसैले हामीले समुद्रमा देखिरहेका प्लाष्टिक चीन सहित अरु देशहरुबाट आएको हो ।” यसरी पानी, हिउँ गर्दै बिस्तारै प्लाष्टिक वातावरणकै एउटा हिस्सामा परिणत भइरहेकाप्रति वैज्ञानिकहरुले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । द गार्जियनबाट